စိုထိုင်းသော Vanilla Bundt ကိတ်မုန့်
တစ် ဦး buttermilk glaze နှင့်အတူဂန္စိုထိုင်းသော vanilla bundt ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သင်၏နောက်ပါတီပွဲသို့အလျင်အမြန်လွယ်ကူစွာရောက်ရှိနိုင်သောကိတ်မုန့်!
ဘယ်လိုစတုရန်း fondant ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုနှင့်ဤစူပါချွန်ထက်အနားနှင့်ထောင့်ရဖို့ကိုဘယ်လို။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစတုရန်းမုန့်ပြားအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များအားလုံး!
ပြင်သစ် Macaron စာရွက်
ပြင်သစ် macaron စာရွက်အဆင့် -by-step ။ Battery ကိုဘယ်လိုရောနှောရမလဲ၊ ဘယ်လိုပိုက်တွေဘယ်လိုဖြတ်ရမယ်၊ အကောင်းဆုံး macaron စာရွက်။
ကောင်းသော, တည်ငြိမ် berry သီးအဆာလုပ်ခြင်းသင်ထင်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သင်၏သီးသီးများကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပါ။ ဒါကိုကိတ်မုန့်တွေ၊
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ကိုရောစပ်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ သင့်ရဲ့ပုံမှန် box ရောနှောခြင်းနှင့်သံပုရာ buttercream နှင့်အတူနှင်းခဲအနည်းငယ်အပိုပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ပါ! အရမ်းကောင်းပါတယ်!
မူလ Lofthouse ကွတ်ကီး (Copycat စာရွက်)
မူလပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ Lofthouse cookie စာရွက်အမှန်။ အရမ်းကိုပျော့ပျောင်းတဲ့အခွံနဲ့ချိုသော buttercream နှင်းခဲထဲမှာဖျော့ဖျော့။
Isomalt သည်သကြားအစားထိုးခြင်း (များသောအားဖြင့်သကြားလုံးသကြားလုံးများတွင်သကြားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်) နှင့်သင်၏ကိတ်မုန့်များသို့မဟုတ်အခြားစားသုံးနိုင်သောစီမံကိန်းများတွင်စားသုံးနိုင်သောအလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုရန်အလွန်သင့်တော်သည်။
အကောင်းဆုံးအိမ်လုပ်အထူဘလူးဘယ်ရီအဆာပြုလုပ်နည်း။ ဘလူးဘယ်ရီပိုင်၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သော pies၊ ချိကိတ်နှင့်ပင်ကိတ်မုန့်အတွက်ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပေါင်မုန့်အမြန်စာရွက်လိုပါသလား ဤပျော့ပျောင်းသောပေါင်မုန့်သည်လုပ်ရန်မိနစ် ၆၀ သာကြာသည်။ အထူးအိုးများနှင့်ပေါင်မုန့်စက်များမလိုအပ်ပါ။
ချောကလက် Mirror Glaze စာရွက်
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်အချိုပွဲအတွက်ချောကလက်အလှဆင်ခြင်း ၆ မျိုးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ နယ်ပယ်များ၊ လိပ်ပြာများ၊ ခွက်များနှင့်အခြားအရာများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ဘယ်လိုအရောင်ကိတ်မုန့် Battery ကိုလုပ်ဖို့